Face of The Week: कराँते मेरो जीवन हो: पुष्प न्यौपाने, दमकेली युवा परदेशमा परिचय बनाउदै::Hamrodamak.com
Face of The Week: कराँते मेरो जीवन हो: पुष्प न्यौपाने, दमकेली युवा परदेशमा परिचय बनाउदै
“जीवन सधै कहाँ उसैतै हुदो रहेछ । उमेर सँगै समय बित्दै जाँदा कुनै कुनै पल खुशी मिल्दो रैछ । यसैले कराँते मेरो जीवन हो । हजुरहरू सँग सधै बिजयको आशिर्वाद माग्दछु ।
फेसबूकको वालमा यो स्टाटस पढ्दा मेरो मनमा यति धेरै खुशी र उमंगले भरिएर आयो कि म पनि केही कुराहरू शेयर गरौं । तर पुष्प भाइसँग पहिला केही थप जानकारीहरू मागौं र शेयर गरुँ कि भन्दै अनलाइन इमो च्याटमा ब्यस्त भए । भोलिपल्ट एउटा यस्तो “ब्यक्ति परिचय ” लेखे ।
प्रत्येक ब्यक्तिमा एउटा एउटा कलाको गुण लुकेको हुन्छ । फरक यति मात्र हो, कोही कलालाइ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सफल हुन्छ भने कोही आफू भित्रको कलाकारिता लाइ सिमित ढंगले सन्चालन गरि त्यै विधामा आश्रीत हुन पुग्छ । आफू भित्रको कला लिएर जीवनलाई अगाडि बढाउनु त्यति सजिलो हुदैन । यहाँ राम्रो काम गरेर, राम्रो र ठूलो मान्छे बन्छु भन्नूमा धेरै चुनौतीहरू हुन्छन । तेस्तै चुनौतिहरूलाई पार लगाउदै यूवा उमेरमा जोश, जाँगर र सफलताका साथ अघि बढ्दै गरेका एक सफल खेलाडी ब्यक्तित्व हुन, पुष्प न्यौपाने ।
पूजनीय बुबा सूर्य बहादुर र आमा डम्बर कुमारी न्यौपानेको कोखबाट बि. सं. २०५२ सालमा कान्छो छोराको रुपमा जन्मिएका हुन । उनको जन्म झापा जिल्ला, दमक नगरपालिका वार्ड न. १९, को इन्द्रेणी ताल छेउमा अवस्थित बिरेन्द्रडाँगी टोलमा भएको हो । सामान्य परिवारमा जन्मिएका पूष्पको वाल्यकाल अवस्था घर – परिवार सगै बितेको थियो । सानै देखि उनको झुकाव खेलकुद र संगीत क्षेत्रमा थियो । उनको शिक्षा आर्जन नजिकैको स्कुल श्री सिंह देबी माध्यामिक विध्यालयबाट भएको हो । स्कुलमा हुने अतिरिक्त क्रीयाकलापहरु जस्तै; खेलकुद, फुटबल खेल्ने, गीत गाउने र नाचगानमा भाग लिने गर्दथे । यस्ता प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम हरूमा जितेर पुरस्कारहरू पनि पाउने गर्दथे । पुरानो मोजाको गोल बनाएर साथीहरूसँग घर अगाडिको बाटो र मावा खोलाको बगरमा समेत फुटबल खेल्दथे । अनि आफूले गोल पोस्ट भित्र गोल छिराउदा ” किन गोल छाडिस हँ ?” भन्दै साथीहरूलाइ खै गर्दै गाली र ताली बराबर दिदै सम्झाँउथे । उनी सानै उमेर छँदा साथीहरूको लहलहैमा लागेर पैसा कमाउन भनि घर र पढाई छाडेर भारतको केरला तिर गए । उनले केरेलामै डो जो कराँते सिक्ने मौका पाए । परदेशको ठाँउमा एक समय अर्काको अरन खटनमा काम गर्दै रहे । अर्को एक समय कराँते खेल सिक्ने राम्रो समय बनाउदै एक सफल भबिस्य जीवन खोज्दै हिडे । फलस्वरूप: उनले प्रारम्भिक स्तरको कराँतेखेल केरेला बाटै पूरा गरे ।
पूष्पलाई गाउँ घरमा ज्योतिषी कान्छाको कान्छो छोरा भनेर चिनिन्छ । उसलाई “सुने ” को नामले पनि बोलाइन्छ । उनले केरेलामा केही समय काम त गरे तर भनेजस्तो पैसा कमाउन सकेनन । वल्लो गाउँ, पल्लो गाँउका साथी भाइहरू बिदेश गएर पैसा कमाइ ल्याको देखे पछि फेरि उसलाइ बिदेश जाने मन बढ्न थाल्यो । सोही अनुरुप बि. स. २०७१ पूष २८ गते उनी फेरि वैदेशिक रोजगारमा अरब मुलुक को यु. ए. इ., दुबइ शहर गए । बाउन्न डिग्रीको तातो घाम र ह्युमिडिटीले निकालेको पसिना पुछ्दै अरू पनि हरेक समस्याहरू सामाना गर्दै बिस्तारै खटेर, डटेर काम गर्ने बानी पर्यो पुष्पको ।
सन २०१६ को अक्टोबर २८ तारिखमा ” दुबइ गोल्डेन फिस्ट एकाडेमी” ले ” इन्टर डोजो कराँते च्याम्पियनसीप ” को आयोजना गरेको थियो । वास्तवमा त्यो दिन नै उसको लागि जीवनको महत्वपूर्ण दिन बन्यो । पूष्पले पनि दुबइ पुगेर काम गरेको अठार महिना पछि सो च्याम्पियन कम्पिटिसनमा भाग लिने सु – अवसर पाए । उनी सत्र जना कराँते खेलाडी मध्येको एक प्रतिस्पर्धी थिए । सोह्र जनालाई खेलमा उछिन्दै उनले अग्रता कायम गरे । पूष्प लाई कसैले जित्न सकेनन । अनन्त; उनी सफलताको शिखरमा पुगेरै छोडे र प्रथम च्याम्पियन उपाधी प्राप्त गरे । स्पोन्सर टिमले पनि कराँते च्याम्पियनसिपमा पहिलो बिजेताको रुपमा घोषणा गर्दै सोही दिन उनलाइ नोभेम्बर तीनमा ” इन्टरनेशनल ब्लाक बेल्ट ” लिनलाई निमन्त्रणा गर्यो । अघिल्लो दिन भएको स्टेज प्रोग्रामको डान्स प्रतियोगितामा पनि तेस्रो बिजेता भएका थिए र प्रमाण पत्र, ट्रफी, मेडलको साथमा ६०० दिराम नगद पुरस्कार पनि पाएका थिए ।
वास्तवमा, यो जित पुष्प न्यौपानेको मात्र नभएर हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुको बिजय हो । यो सफलतामा हाम्रो गाउँ, टोल र समाजको सफलता जोडिएको छ । हामी दमक उन्नाइसको मात्र नभएर एउटा सिङ्गो दमक को गौरव हुन भन्नमा दुई मत नहोला । हाम्रो दमक उन्नाइसको सामाजिक जीवनमा डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, वकिल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, गायक जस्ता कुशल ब्याक्तित्वहरुको जन्म भइरहेको छ । आज पनि तपाईं हामी माझ हाम्रो गाउँ, टोल, समाजको खेलकुद तथा कराँते क्षेत्रमा एक नव प्रतिभाशाली युबा कराँते खेलाडी बिहानीको सुर्योदय जस्तै बनेर उदाइरहेका छ्न । बिदेशको ठाँउमा एक श्रमिकको रुपमा रहेर पनि आफ्नो मिहिनेत र लगाबले ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छन ।
आउनुहोस, तपाइँ हामी सबैले अन्तर आत्मा देखि नै हौंसला र सम्मान गरौं । उनको साहसी कदम नै हाम्रो समाजको साहस हो । उनको खेल जीवनको प्रत्येक कदमहरू हामी, हाम्रो समाज र सन्ततिहरुको लागि शिक्षा र उपदेश पनि बन्न सक्ने छन । धन्यवाद, जय देश ।
पुष्प न्यौपानेसँग प्रत्यक्ष अनलाइन इमोमा गरेको संक्षिप्त्त कुराकानीको आधारमा तयार गरिएको ।
Face of The Week [विष्णु कटुवाल] सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै १६ औ एसियन गेम खेलेका खेलाडी
२०४२ सालमा सप्तरीको फत्तेपुर वडा नं ३ मा जन्मिएका विष्णु कटुवाल गोबिन्द कटुवालका जेठा छोरा हुन । गोबिन्दका तीन सन्तान मध्येका जेठा छोरा विष्णु कटुवाल नेपाल प्रहरीका राष्ट्रिय व्याटमिन्टन खेलाडी हुन । विष्णुले फत्तेपुर...
Face of The Week [भावना अयेर] अन्यायमा परेकाहरुको न्यायका निमित्त लड्छु !
कंचनपुर जिल्लाको सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा बुबा स्वर्गीय जगत बहादुर अयेर र आमा अनिया अयेरको कोखबाट २०४८ सालमा जन्मनु भएकी भावना अयेर सामाजिककर्मी हुन । उनी बालबालिका, महिला र युवाहरु सगं सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानका निमित्त काम...